Uphuhliso lomntwana kwiinyanga ezili-8 lukhula, luya lukhulu, luqilima. Kuthatha ingqwalasela eninzi-kwaye kufuneka umnike ngokwaneleyo.
Ekupheleni kwinyanga yesibhozo, umntwana wakho kufuneka alinganise ngeekhilogram ezilisithoba. Xa ulinganisa umntwana, kuyafaneleka ukuba ucinge, kwiingubo uyayilinganisela okanye uhamba, usihlalo okanye emva. Kwaye ukuba unzima kakhulu ngokumalunga, sincomela ukuba ulinganise umntwana kabini: ngaphambi nangemva kokutya.
Kubantwana abaninzi ukuya kwiminyaka emibini unako ukujonga imilenze ephosakeleyo. Musa ukukhathazeka malunga nale meko, kuba kwenzeka ngenxa yelungiselelo elikhethekileyo lomntwana kwisibeleko. Kodwa musa ukunyamekela ukukhawuleka kwemilenze, njengoko oku kungabangela isifo esinjenge-rickets. Kusemfuneko ukuba ubuze umntwanantsapho wakho wezilwanyana okanye ugqirha wezilwanyana: Yintoni enokubangela ikhefu kwimeko ethile.
Ukuphuhliswa komntwana kwiinyanga ezili-8 kuthiwa unako ukwenza okusemandleni akhe ukuma ezinyaweni zakhe. Nangona kunjalo, ukuba umntwana wakho akenzi imizamo enje ngoku, musa ukukhawuleza le nkqubo. Musa ukukhohlisa uhlobo, kuba oku ungamlimaza umntwana kuphela. Futhi ungakhangeli abanye abantwana uze uqhathanise: bathi, intombi yam ummelwane wayesele elele embhedeni kwiinyanga ezisixhenxe, kwaye uneminyaka yam enesibhozo kuphela izama ukuhlala. Bonke abantwana bahluke, umntu uqhube phambili, kwaye umntu uhamba ngaphambili, konke oku kwenzeka ngexesha elifanelekileyo. Emva konyaka kumathambo omntwana obuthathaka kakhulu kwaye athambileyo, musa ukumlimaza umntwana - uThixo akavumelekanga, uyaphula iinkqubo zemvelo kwindawo yakhe ebuthathaka. Yiba nesineke uze ulinde - umntwana wakho uya kubamba ngokuqinisekileyo yonke into ayiphosayo.
Ngenyanga yesibhozo yobomi, iintsana ziqala ukukhwela ngamandla. Okokuqala, kubonakaliswa ngentshukumo ehambayo kwisisu, ngoko kuthetha, ihamba "kwindlela yeplastiki", ngoko, xa umntwana sele ekhule ngamandla, uhamba ekhwela kuzo zonke ezine. Kodwa esi sikhwameni asiyi kuhamba ngokukodwa, ngoko abazali kufuneka bacinge ngebala, kuba umntwana kufuneka ahlakulele, kwaye atyeke kuzo zonke ezine, uqeqesha ngokupheleleyo onke amaqela omzimba. Ungamvumeli umntwana ukuba akhwebe kwisibhedlele, kuba ugqiba ukuba eli lixesha lakhe lokudlala, kwaye uya kuba neengxaki zokulala. Ukongezelela, mhlawumbi ziindawo ezimbalwa kwi-crib - umntwana akanakho ndawo. Emva kwakho konke, uyabona, akunakuchukumisa ukukhwela nje ngaleyo ndlela, nangenxa yemida emfutshane! Ngoko ke, bhetele kubo bonke - beka ingubo efudumeleyo kunye ne-diaper phantsi, kwaye unciphise umntwana wakho-makumquke. Kwaye ukuze anomdla ekuhambeni, cwangcisa ngokude ukusuka kwintsana ayithandayo kakhulu - uya kuhamba ngokukhawuleza.
Kodwa ukuba usenokugqiba ukuthenga isikolo esikhweleyo-sinokulungileyo. Qaphela ngokucophelela iimidlalo eziza kubakho kwibala lemidlalo, ukuqinisekisa ukuba azinayo ikhonkco ezibukhali. Kwaye kuya kukumangalisa ntoni xa, njengokuba unakekelwa ukhuseleko olusondeleyo lwanyana oluse-Arena, uya kufumana amanqamlezo kunye neentlobo ebusweni bakhe, ipenki kunye nemilenze emincinci! Kodwa ungakhathazeki ngale nto, kwaye nangaphezulu uzama ukukhusela umntwana ukusuka kwingozi emancinci, kuba ngaphandle kwabo awukwazi ukwenza. Siyabulela kulezi zihluthulelo zokuqala kunye neentsimbi ze-crumb kwaye zifumana amava obomi obuxabisekileyo-kwaye oku kukuphuhliswa komntwana.
Ukubuyela kwisihloko semfundo eprayimari, sifuna ukukukhumbuza ukuba umonde wabazali yinto ebaluleke kakhulu ekukhulisweni komntwana, kuba ufunda ihlabathi elikujikelezayo. Ngoko ke, ukuba uyacaphukiswa - ngoko uya kucaphuka, ukuba wenza iphutha - uya kulusebenzisa ngokunjalo kwaye athathe kulo mzekelo. Abantwana, nakuba besencinane kakhulu, kodwa sele beqonda kakuhle - musa ukulibala malunga nalo! Kwaye, ngaphandle koko, ngexesha elincinane kangaka sele sele sele beqhelanisekile kwizengqondo zengqondo kunye nesaziso kwanokuba abantu abadala abakunaki. Ungalokothi umemelele umntwana, rhoqo unomonde uchaza yonke into, kwaye xa kuyimfuneko - maxesha amaninzi. Ukuvelisa umlingani womntwana, qiniseka: ukuba uthe: "Awukwazi", ke akunakwenzeka. Yaye ukuba uthe wanikezela, umntwana uya kukhumbula konke oku kwaye uya kuwusebenzisa rhoqo, ukukhala. Ekugqibeleni, "ongenako" olunjalo luya kuba ngaphantsi nangaphantsi, kwaye umntwana uya kuphangwa aze aphangwe.
Kuhle kakhulu, xa umntwana enesibalo esikhulu samathoyizi: udlale enye, ke enye, ihlala ixakekile. Kodwa kulungile ukuba umntwana ujikelezwe ngezinto ezikhuselekileyo zendlu: i-spoon, i-coil thread, i-toothbrush, dish dish okanye enye into. Ukudlala ngezifundo ezinjalo, umntwana ufumana izakhono ezisebenzayo kwaye ngenxa yoko, ukhula ngokukhawuleza.
Ungabonisi umntwana ukuba uyindawo ephela kuyo yonke indawo (nangona kunjalo, kunjalo). Ukuqwalaselwa ngokugqithiseleyo kuya kusinda ngumntwana wakho - kwaye uya kuba yinto engabonakaliyo, ngenxa yoko kuya kuba nzima ngakumbi ukumfundisa. Ukuba ufuna ukufezekisa into ethile kuye, kufuneka umbonise ngesineke. Khumbula ukuba umntwana uyazi ukuba: abazali banokuthandana, kunye nokuqatha.
Kwiintsuku ezisibhozo ubudala, umntwana sele uzama ukuthetha, nangona ulwimi lwakhe lwentlanzi, kodwa sele seluzama. Uthetha izandi aze aziphulaphule. Ujonge kuwe kwaye uzama ukuxelisa. Ncedisa umntwana kwimigudu yakhe, hlalani phambi kwakhe kwaye uthethe ngeelwimi zamagama alwimi ezimbini: "ma-ma," "pa-pa," njl njl. Kubaluleke kakhulu ukuba umntwana ubone umlomo wakho aze azame ukuphinda ukunyakaza kwawo. Futhi ungakhathazeki - sele esazi kakuhle kakuhle othetha ngaye.
Bonke abazali bayaqonda ngokucacileyo ukuba izinto ezincinci akufanele zinikezelwe umntwana, kuba unokuzihambisa kwiipumlo, indlebe okanye uzame ukugwinya, okubangela ukuba kungabangela ukukhutshwa kwe-airways. Konke oku kunjalo. Kodwa musa ukukhusela ngokupheleleyo umntwana kwizinto ezincinci - kuba nazo ziyinxalenye yophuhliso lwakhe. Cwangcisa amaqhosha kwintambo eqinile kwaye unike umntwana ithuba lokudlala kunye nalo - uya kumangaliswa indlela iminwe yakhe iyenze ngayo.
Ukuba umntwana akafuni ukuya enkulisa
Indlela yokufundisa umntwana kakuhle?
Imithetho yokusinda kunye nomntwana onobuhlungu
Indlela yokucima ngokufanelekileyo ulwalamano olude?
Iimfungu zamangxube kunye neNutella
Indlela yokusinda kwi-PMS?
Iingcebiso ezilula zokugaya iinwele ekhaya